function ကို function - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / လေှျာက်လွှာ / function ကိုအားဖြင့်ရှာပါ
2) လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း၏ clamp များနှင့် ပတ်သက်. ပထမ ဦး ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း chuck သို့နည်းနည်းလက်ကိုင်ကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။
3) အလုပ်ခွင်၏အရွယ်အစားနှင့်တူးရန်အတွက်တူးဖော်သည့်အရွယ်အစားနှင့်တူးဖော်ခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်မတူညီသော clamping method များကိုမွေးစားသင့်သည်။
ဥပမာ - အလယ်အလတ်နှင့်သေးငယ်သည့် Cuboid Workpiece သည် Cuboid Workpiece ကိုပြားချပ်ချပ်ပြားများဖြင့်ညှပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရိုးအမျိုးအစားနှင့်ပိုက် fili fitting အမျိုးအစား v-shaped frame နှင့်အတူညှပ်နိုင်ပါတယ်; အထူးပုံသဏ္ဌာန်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အလုပ်အပိုင်းအစများသည်ဘေးဘက်တွင်စက်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ တူးဖော်ခြင်းကိုလက်ဖြင့်လက်ဖြင့်ညှပ်နိုင်သည့်အခါသေးငယ်သည့်အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်စာရွက်။
4) တူးဖော်ခြင်း parameters တွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်း, အစာကျွေးခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအတိမ်အနက်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်သင့်သည်။
5. တူးဖော်သည့်အခါတူးဖော်ခြင်းကိုရေတိမ်ပိုင်းတွင်းတူးရန်နမူနာလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်းနှင့်၎င်းကအမှတ်အသား၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ပါ။ အကယ်. စားပြီးသိလျှင်, တံတားကိုချက်ချင်းဖြောင့်စေသင့်သည်။
Workpieces လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် tool toods အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချပါ
အမှန်တကယ်အပြောင်းအလဲအရဘောလုံးအစွန်အဖျား၏အစွန်အဖျားသည်အမှန်တကယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကြိတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင်အအေးခံမှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်း area ရိယာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Toolpiece လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် Tool To To To The Tour ကိုအတော်လေးကြီးမားသည်ဖြစ်စေ,
ဖြောင့်သောနံရံများအတွက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသို့ပုံသဏ္ method ာန်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အထူဆုံးအထူကိုအထူဆုံးသောဘောလုံးကိုအောက်သို့တက်ပါကပြိုကွဲရန်လွယ်ကူသည်။ Ball-end Cutter သည် Chip ဖယ်ရှားရေးအတွက်အကျိုးရှိသည့်အထက်သို့တက်သည်။
နက်ရှိုင်းသော groove ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးဆောင်
နက်ရှိုင်းသော groove ကိုပြုပြင်သည့်အခါကိရိယာသည်လုံးဝနစ်မြုပ်သွားနိုင်သည်။ Ball-end Cowter ၏ချစ်ပ်အိတ်ကပ်သည်အနည်းငယ်သေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အစာကျွေးမှုနှုန်းဖြင့်စေးကပ်သောပစ္စည်းများ (ကြေးနီ) ကိုပြုပြင်သည့်အခါကိရိယာကိုချိုးဖျက်ရန်လွယ်ကူသည်။